Waxaan ugu dambeyntii haysannaa Apple AirTags | Waxaan ka socdaa mac
Apple ayaa maanta soo bandhigtay AirTag, oo ah qalab yar oo si qurux badan loo qaabeeyey oo kaa caawinaya inaad la socoto oo aad hesho waxyaabaha muhiimka u ah barnaamijka Apple ee Find My app. Ku xidhnow shandad, fureyaal, boorso ama waxyaabo kale, AirTag ka faa'iideyso shabakadda weyn ee raadinta shabakadeyda waxayna kaa caawin kartaa helitaanka shey lumay.
Xanta ayaa la fuliyay iyo waxaan ugu dambeyntii haysannaa AirTags nala. Qalabkan yar ayaa naga caawin kara helitaanka wax kasta oo aan luminno mahadnaqa tiknoolajiyada Raadi My.
Ka faa'iideysiga shabakadda weyn ee caalamiga ah Raadi My ayaa kaa caawin kara helitaanka shey lumay. Dhammaan iyadoo la ilaalinayo xogta goobta si gaar ah oo qarsoodi ah oo qarsoodi ah dhamaadka-ilaa-dhamaadka. AirTag waxaa lagu gadan karaa hal iyo afar baako oo kaliya $ 29 iyo $ 99, siday u kala horreeyaan. Waxaa laga heli karaa Jimcaha, Abriil 30.
Kaiann Drance, Madaxweyne Ku-Xigeenka Suuq-geynta Adduunka ee Apple iPhone Products:
Waxaan ku faraxsanahay inaan u soo bandhigno awooddan cusub ee cajiibka ah kuwa isticmaala iPhone iyadoo la adeegsanayo AirTag. Ka faa'iideysiga baaxadda weyn ee Raadi shabakadayda, si aan uga caawiyo iyaga inay ogaadaan raadso oo raadi waxyaabaha muhiimka u ah noloshooda. Iyadoo la adeegsanayo naqshadeeda, waayo-aragnimadeeda raadinta ee aan horay loo arag, iyo waxyaabaha lagu kaydiyo qarsoodiga iyo amniga, AirTag waxay macaamiisha siin doontaa waddo kale oo looga faa’iideysto awoodda nidaamka deegaanka ee Apple loona xoojiyo kala duwanaanta iPhone-ka.
AirTag kasta waa wareeg yar oo khafiif ah, wuxuu ka kooban yahay bir bir ah oo aan sifeyn loo sifeeyay, waana biyo iyo boodh u adkaysta IP67. Boqolkiiba 100 waa la habeyn karaa. Sameecad ku dhex jirta ayaa dhawaaqaya si ay uga caawiso helitaanka aaladda, halka daboolka laga saari karo u sahlayo dadka isticmaala inay badalaan batariga.
AirTag ayaa leh Isla khibrad dejin sida AirPods. Kaliya waa inaad qalabka u dhawaataa iPhone waana xiriiri doonaa. Isticmaalayaashu waxay u xilsaari karaan AirTag shay oo waxay ugu magacaabi karaan qiimo go'an sida "Furayaasha" ama "Jaakada", ama waxay siiyaan magac caado ah oo ay doortaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Waxaan ugu dambeyntii haysannaa Apple AirTags